Tiorkia, fifaninanana henjana ho an’ny Netflix ny fisian’ilay lahatsary Youtube ana lehiben’ny Mafia · Global Voices teny Malagasy
Sedat Peker nandefa lahatsary miresaka fifamatoran'ny governemanta amin'ireo heloka voaomana
Voadika ny 23 Mey 2021 7:30 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsary iray avy ao amin'ny fantsona Youtube an'ilay Tiorka lehiben'ny mafia mpanao heloka bevava nomanina, Sedat Peker.
Nitafy lobaka fotsy, mipetraka eo amin'ny birao iray izay ahitàna ireo zavatra toa notsongaina sy nalamina tsara – isan'izany ny saple sy boky iray (miova foana isaky ny lahatsary) – nanomboka namoaka tamim-pahasahiana ny fisian'ny fifamatorana eo amin'ny governemanta tiorka sy ny heloka bevava nomanina ilay lehiben'ny mafia tiorka. Saingy aoka tsy ho diso fandray: tena fiainana io fa tsy fandaharana vaovaon'ny Netflix akory – na dia nahazo jery an-tapitrisa aza, mpifaninana matanjaka ho an'ireo fandaharana malaza be ao Tiorkia alefan'ny Netflix ilay andiana lahatsary nanomboka nivoaka tao amin'ny Youtube ny volana May.
Afisy lehibe Netflix mahatsikaky momba an'i Sedat Peker nokarakaraina tao amin'ny media sôsialy.
Tena milokaloka aho fa tsy mbola nandefa andiany tena mahaliana tahàka io iray io raha ny Netflix. Efa ao anaty tambajotra izao ny fizaràna faha-5 amin'ny Sedat Peker.
Ny 2 May i Sedat Peker, ilay mpisehatra ao anatin'ireo lahatsary, no nanomboka nandefa ireo lahatsary tao amin'ny YouTube. Nanomboka teo, nafafiny teny rehetra teny “ireo fiampangàna ireo manampahefana manodidina an'i Erdogan ho nanao fanolànana, fanelezana zavamahadomelina, ireo fahafatesana mampiahiahy.” Lasibatra hatreto ny minisitry ny atitany amin'izao fotoana izao, Suleyman Soylu, ny tale taloha nisahana ny fiarovana ary lasa mpanao politika, Mehmet Agar, ary i Berat Albayrak izay minisitry ny fitantanambola taloha, vinantolahin'ny filoha Recep Tayyip Erdogan. Saingy ny tena fanontaniana apetrak'i Peker dia ny antony niatahan‘ny governemanta tiorka sy ny namadihan'ireo manamboninahitra ambony azy.
Peker, 49 taona, dia in-droa voaheloka ho nanao heloka bevava nasiam-panomanana, ary anaty lisitra menan'ny Interpol. Tao anatin'ny lahatsary fahaefatra nalefany, nilaza i Peker fa, rehefa atambatra, 16 taona sy tapany no laniny tany am-ponja.
Ankehitriny, voalaza fa mipetraka ao Dubai, tamin'ny 2020 izy no nandao an'i Tiorkia ary taorian'ny fandalovany fotoana fohy tany Balkàna. Niakatra ny lazany tamin'ny 2016, rehefa norahonany ny “handatsa-drà” ireo olon'ny oniversite nanao sonia ilay fanangonantsonia niampanga ireo hetsika miaramila natao tamin'ireo Kiorda tany atsimo-atsinanan'i Tiorkia. Nafahana i Peker taorian'izay, ary raha kely indrindra dia tamina fotona roa samihafa, indray mandeha, taorian'ilay andrana fanonganam-panjakana tsy nahomby tamin'ny 2016, rehefa nandrahona izy haka ireo mpanongam-panjakana tany am-ponja, ary indray mandeha fony izy nandrahona ilay mpanao gazety, Fatih Altaylı.
Araka izay mendrika ilazàna azy, tsy misy zava-baovao aloha hatreto izay nambaran'i Peker tany anatin'ireo lahatsary nalefany, saingy tsy isalasalàna fa ny famerimberenan'i Peker ny fiasian'ny fifamatorana eo amin'ireo manampahefana ambony ao anatin'ny antoko sy ireo hetsika dia manaratsy endrika ny antoko Rariny sy Fandrosoana izay eo amin'ny fitondrana. Fa ny tena lehibe indrindra, ireo lehilahy manana toerana ambony no lasibatra anatin'ireo tantaran'i Peker, nefa ireo toa tsy mihontsona akory manoloana ireo fandrahonana, hoy ny nosoratan'ilay mpanao gazety, Pinar Tremblay, tao anatin'ny lahatsorany vao haingana ho an'ny Al-Monitor, nanampiany fa ” mitondra lanja goavana ireo teniny [Peker] amin'ny maha-tao anatiny azy satria nihena be tokoa ny mangarahara amin'ireo asa ataon'ny governemanta.”
Ilay lahatsary nalefa tamin'ny 20 May dia manampy ireo likiliky tsy mitsahatra mitombo vokatry ny ataon'ny governemanta Erdogan, miaraka amin'ny fanambaràny fa ireo mpanao gazety mpomba ny fitondràna dia niasa ho toy ny mpanelanelana teo amin'i Peker sy ny minisitry ny atitany, Süleyman Soylu.
Hatreto, tsy nisy nanao fanamarihana momba ireo fiampangan'i Peker an'ireo marobe manamboninahitra voakiana loha ireo lasibatra tamin'izy ireny, ary tsy misy dingana ara-pitsaràna natao hanenjehana an'i Peker raha tsy efa ny minisitry ny atitany mihitsy no nataony lasibatra, Süleyman Soylu izay nametraka fitoriana ady heloka nanenjehany an'i Peker tamin'ny 17 May noho ireo andiana fiampangàna. Tao anatin'ny fizaràna iray nitanisàny an'i Soylu, nolazain'i Peker fa nosoniavin'ilay minisitra ny momba ny hanomezana sampana fiarovana natao ho an'i Peker hatramin'ny 2015 ary nanampy an'i Peker izy tsy hiharan'ireo fanenjehana azy rehefa nisy fanadihadiana iray natomboka tamin'ny fiandohan'ny 2020 momba ireo hetsika nataon'ity lehiben'ny fanaovana heloka bevava nasiam-panomanana ity.
Nahagaga, somary nangatsiatsiaka sy miala bàla ny valinteny avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondràna momba ireo fiampangàna, hoy ny nosoratan'ny mpanao gazety, Zülfikar Doğan. Mifangarika amin'ny fomba tany aloha fanaon'ny governemanta nentiny namaliana ireo kiana io. Fa naleony, tamin'ity indray mitoraka ity, nanome tsiny ny avy amin'ny fanoherana, izay niampangàna an'i İbrahim Kalın, mpitondratenin'ny filohany, tamin'ny 13 May, ho manao lalao ratsy momba ireo fanambaràna nataona lehiben'ny mafia.
Tantara iray mampalahelo loatra ho an'ny mpanohitra, miditra amina adihevitra poakaty, ny fitadiavana fanampiana amina hevi-dravin'ny olomalazan'ny mafia sy fanaovana kajikajy politika madinika hanohintohina ny minisitry ny atitanintsika. Antenaiko fa hahatsiaro menatra amin'izay vitany ry zareo.
Raha niteny nandritra ny fivorian'ny kabinetra tamin'ny 18 May rehefa nangina nandritra ny herinandro maro, noresahan'ny filoha Erdogan ihany no niafarany ny momba ireo fiampangàna nataon'i Peker, ary nanome toky izy fa “hopotehany ity fampisehoana maloto ity.” Ao anatin'ny fotoana isian'ny krizy ara-toekarena mananontanona ao anivon'ny tolona ataon'ny governemanta hiadiana amin'ny COVID19, tsy mahavaly ny olana izay goavana kokoa ny fampanantenana tahàka izany—mbola tantara ratsy iray hafa indray no mamely ny antoko Rariny sy Fandrosoana izay eo amin'ny fitondràna, sady iray izay mety tsy ho ampy ny fanapotehana azy fotsiny.